स्टिपल: बुद्धिमान र अन्तर्क्रियात्मक छविहरू | Martech Zone
बिहीवार, जनवरी 10, 2013 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
के हुन्छ यदि तपाईं छविहरू तपाईंको वेबसाइट वा ब्लगमा पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ, तिनीहरूलाई अन्तर्क्रियात्मक बनाउनुहोस्, र उनीहरूसँग प्रयोग र ट्यागि travel्ग यात्रा तपाईंको साइटबाट प्रतिलिपि गरिएको र अर्कोमा बचत गरिएमा? तपाईं अब यो संग गर्न सक्नुहुन्छ स्टिप्पल। स्टिप्पलले उनीहरूको माध्यमबाट उपयोग जानकारी सक्षम गर्दछ विश्लेषण प्याकेज कार्यमा स्टिप्पल हेर्न तलको छवि माउस गर्नुहोस्!
तपाईले अन्तर्क्रियात्मक ट्यागहरू देख्न सक्नुहुनेछ जुन मैले हाम्रो अफिसको छविमा थपें ​​- म्यापि।, फेसबुक, ट्विटर, र किनमेल ट्याग जहाँ तपाईं मेरो पुस्तक खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई लाग्छ स्ट्प्पललाई मार्केटिंगको दृष्टिकोणबाट प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ एउटा कुरा भनेको इन्फोग्राफिक्सको प्रकाशन हो! कलआउट थप्न र इन्फोग्राफिकको प्रयोग अनुसरण गर्ने क्षमता भएको जुनसुकै जीवलाई अविश्वसनीय रूपमा सहयोगी हुन्छ।
ट्यागिंग र प्रबन्ध ईन्जिन नि: शुल्क छ र सामाजिक साझेदारी अनुप्रयोगको रूपमा निर्मित छ।
यहाँ प्रविधि को एक भिडियो सिंहावलोकन छ:
स्टिप्पल तपाइँको ब्लगबाट छविहरू स्वचालित रूपमा सि sy्ख्रोनाइज र लोड गर्न WordPress र अन्य सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीका लागि प्लगइनहरू विकसित भएका छन्।
स्टिपल को छविहरु मा प्रयोग हुनेछ समालोचकहरूको विकल्प चलचित्र पुरस्कार। सँग साझेदारीमा PEOPLE, प्रशंसकहरूले रेड कार्पेटको माध्यमबाट 'फिल्महरू र फेसन' अन्वेषण गर्न र खरीद गर्न सक्दछन् PEOPLE.com का कभरेज आलोचकको विकल्प चलचित्र पुरस्कार। स्टिप्पलको अन्तर्क्रियात्मक टेक्नोलोजीले फ्यानहरूलाई ताराहरू, उनीहरूको चलचित्रहरू र शैलीहरूको बारेमा अझ बढी सिक्न सक्षम गर्दछ। समालोचकको फिल्म चलचित्र पुरस्कार बिहीबार, जनवरी १०, साँझ 10 बजे EST मा आयोजित हुनेछन्। रातो कार्पेट प्रि-शो बेलुका 8 बजे EST मा सुरू हुन्छ।
टैग: छवि एनालिटिक्सछवि कलआउटहरूछवि ट्यागिंगछवि उपयोगबिरुवा